ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်များဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီတို့တွင်အလုပ်ခန့်ထားနိုင်သည် - ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီတွင်အလုပ်ရနိုင်သည်။
ဒူဘိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုများတွင်ဂျော့ဘ် - ကျနော်တို့ယခုစုဆောင်းနေကြသည်
ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အဒူဘိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုများတွင်ဂျော့ဘ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ အသစ်အလုပျသမားမြားကူညီခြင်း။ ကောင်းသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအထူးသဖြင့်တဦးတည်း။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ပြည်ပမှာအလုပ်ရှာနေလျှင်။ ထိုအရှိခြင်း အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအဖွဲ့ကသငျသညျကူညီပေးနေမျှော်လင့်နေပါတယ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ပြည်ပမှာလုပ်သားများ။ အဘယ်သူသည်အလုံအလောက်အတွေ့အကြုံရှိသည်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့တိုင်လုပ်နိုင် လုံခြုံရေးကဏ္ဍတွင်ဥပမာအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုများတွင်ဂျော့ - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ, ကျနော်တို့ယခုဒူဘိုင်းမှစုဆောင်းနေကြသည် !. တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရှိပါတယ် tubai နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရရှိနိုင်အလုပ်အကိုင်များ။ ယနေ့သင့်ရဲ့ updated CV ကိုနှင့်အတူသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် Apply !. ဒူဘိုင်းမြို့နှင့်အဘူဒါဘီယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော ဧရာကြီးထွားအောင်တဲ့နှစ်ကအောက်ပါ များစွာသောအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်အတူ။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, စော်ဘွားတိုးတက် ရေနံစျေးနှုန်းများအတူ။ ဒီရက်ဟာ GCC ဒေသနောက်ဆုံးတော့စီမံခန့်ခွဲဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အလွန်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များ နှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အထူးအစီအစဉ်များကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း အလုပ်ရှာဖွေသတ်မှတ်ထား မြင့်တက်လာဘို့တည်ငြိမ်အစီအစဉ်ကို သင်တို့အဘို့အလုပ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့ဖြစ်နိုင်ချေ။ ဤအချက်များပေးထားကျနော်တို့အလုပ်သစ်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအလယ်အလတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတို 2018 သည်အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်.
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီကျော် 950 အလုပ်ရှင်များ၏စစ်တမ်းတစ်ခုကြာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုဖြတ်ပြီး။ ဒီတော့ foreground အတွက်ကျနော်တို့အဘို့အချို့အကြံပြုချက်များကိုဖန်တီးကြ အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ.
နေဆဲတစ်ဦးကရေနံ & ဓါတ်ငွေ့ကဏ္ဍများအတွင်းဆောက်လုပ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Sharjah ကြီးထွားလာ ဒူဘိုင်း, ဒါပေမယ့်အဘူဒါဘီအတွက်ချမယ့်နှေးမှာ။
35,000 ကျော် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ များမှာ အလုပ်အကိုင်အ Portal နှင့်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများကျော်ငှားရမ်း.
ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်သည် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့န်ထမ်းခေါ်ယူမှု ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - ဒူဘိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုများတွင်ဂျော့ဘ်
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် - အလုပ်အကိုင်ရတဲ့များအတွက်ပြည့်စုံလမ်းညွှန်
သငျသညျသစ်ကိုရရှိရန်ရှာဖွေနေလျှင်ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးသတင်းရှိပါတယ်။ များစွာရှိပါသည် မွို့၌ပေါများအလုပ်နေရာလွတ် သူတို့ထံမှကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သို့သော်တဦးတည်းအရာများအတွက်, အလုပ်၏အလုပ်လုပ်ကိုင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အချိန်ဖြစ်နိုင်ပါသည် သင့်ရဲ့ဇာတိမြေနိုင်ငံကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားသော။ ထောက်ပြဖို့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေသည့်လုပ်ငန်းစဉ် အကြှနျုပျတို့သညျကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုချရေးထားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးမှာကြည့် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ.
အသစ်အဘို့ကြီးသောသတင်း ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ အကောင်းတစ်ဦးကျွမ်းကျင်မှုလုပ်နိုင်တဲ့သူတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်နောက်ထပ်အဓိကသော့ချက်အချက် ယူအေအီးအတွက်ကောင်းစွာ-paid အလုပ်ရ။ တဦးတည်းအရာအဘို့, ရုံဒူဘိုင်းရောက်ရှိလာခဲ့သောလူ အသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေးအခေါ်များမှဖွင့်လှစ်။ သင်ရှာနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုအလုပ်ကိုသိရန်လိုအပ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသို့ရဖို့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အောက်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအနည်းငယ်အကြံပေးချက်များထောက်ပြ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များ။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များဒူဘိုင်းမြို့နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရာထူး၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးကျော်လတ်ဆတ်တဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ရရန်သင့်အား enable ။ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုရရန်သင့်သော့ချက်.
ကြုံတွေ့အကောင်းဆုံးကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးအမြန်အမြင် Get အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်အပေါ်အလုပ်တွင်ကျယ်စွာ။ ငါတို့သည်လည်းထောက်ပံ့အတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်ရန်ကြိုးစားနေ တစ်ခုချင်းစီကိုအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်တန်ဖိုးသတင်းအချက်အလက်များ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ကုမ္ပဏီများမှနေသောသင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းမှုများအတွက်အကောင်းဆုံး.
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်ရှိ အလွန်လူကြိုက်များအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များတွေအများကြီး။ သူတို့ထဲကတချို့ကစူပါလူကြိုက်များဖြစ်လာ, ဒါကြောင့်သင်မကြာခဏရာပေါင်းများစွာဆန့်ကျင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ သင်ကြီးမားတန်းစီအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်သူတို့အားအခြေအနေများ, သင့်အပေါ်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေး WhatsApp ကိုအပေါ်အလုပ်အမဲလိုက်ခြင်း သင်တို့ရှိသမျှတူညီတဲ့အဘို့အသွားအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကို.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်မှာမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါရန်သင့်အားပြသရန်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အမြင့်ဆုံးပေးချေအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေ. အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဒူဘိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုများတွင်ဂျော့ဘ်.
ဒူဘိုင်းအတွက်ယူအေအီးနှင့်ဂျော့ဘ်သည်ဒူဘိုင်းအတွက်ထိပ်တန်းယောဘသည် Portal ကိုဆိုက်ကို?
ကြှနျတေျာ့အလုပ်ရှာဖွေအတွက် legit ကုမ္ပဏီ
# THE BEST ကုမ္ပဏီ No.1 - ထိပ်တန်း: ယောဘသည်ဆိုက်ကိုများအတွက် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့််ထမ်းခေါ်ယူမှုဝန်ဆောင်မှု.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ - Winner ကုမ္ပဏီနှင့် No.1 ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးပေးသူ။ ကျနော်တို့အကြောင်းကိုရေးသားနေကြသည် ယူအေအီးဖြစ်ပျက်သောအရာ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအလုပ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည် အလုပ်ရှာဖွေစျေးကွက်က်ဘ်ဆိုက်အတွက်အဓိကကစားသမား။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာရှာဖွေစုဆောင်းဖတ်ရှုနေသောခေါင်းစဉ် ဒူဘိုင်းရှိအခြားအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီမှုအတွက်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့သင်ဟာအလုပ်မုဆိုးအဖြစ်ရှာဖွေစုဆောင်းနေတဲ့အရေးအပါဆုံးအခန်းကဏ္ဍရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူအများစုဟာနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်ရှာဖွေသူများအိန္ဒိယကနေကျော်လာနေကြသည်, ပါကစ္စတန်အဖြစ်ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ ဒူဘိုင်းအတွက် ရေခြားမြေခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်အားဖြင့်နှင့် မြို့ကြီးများစင်တာများ အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်စုဆောင်းမှု, အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်လုပ်ဘို့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက် Legit က်ဘ်ဆိုက်များမှာ
တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်ကိုထောက်ပံ့ပေး မြင့်မားသောလစာစကေးဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေသည် သင်သည်အိပ်မက်အလုပ်တစ်ခုဆင်းသက်ကူညီရန်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဘသည်မုဆိုးနှင့်ဥရောပအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်အများဆုံးနှစ်သက်သောနှင့်ရှာဖွေအိပ်မက်နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကအကောင်းဆုံးကျွမ်းကျင်သူများ destination သို့ဖြစ်ပါသည် သူတို့ကိုများစွာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အခြေခံအလုပ်ရရန်နောက်ဆုံးပေါ်အတွေ့အကြုံကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ် အမှုဆောင်အရာရှိအားမရအတွက်အကောင်းဆုံး။ လည်းပဲ နိုင်ငံတကာကစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့က GCC နိုင်ငံများတွင်ကျော်အလုံးစုံတို့အဘို့ပိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများပေးသည်။ ဥပမာ, သငျသညျစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလယ်ပြင်၌တစ်ဒီဂရီရှိပါကသင်သည်တတ်နိုင် ကြှနျုပျတို့အတှကျအလှနျကောငျးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီန်ဆောင်မှုများ၏ရလဒ်အဖြစ်ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယ, ဖိလစ်ပိုင်, ဆော်ဒီ, ကာတာ, အတူလုပ်ကိုင်နေကြ ပါကစ္စတန်အလုပ်မုဆိုး။ ဒီတော့အကျိုးဆက်ဒူဘိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေကြသူတစ်ဦးချင်းစီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများသည်။ ကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်း rated အလုပ်အကိုင်များကိုပေး။ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူန်ထမ်းခေါ်ယူမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏အချိန်မဖြုန်းတီးကြပါရန်သင့်အားကျိန်းသေသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း upload တင်သင့် ပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ်တွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်ကြိုးစားကြ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုလည်းလူမှုရေးမီဒီယာအတွက်အံ့သြဖွယ်စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ထိုအပင်ကိုပို။ ကျနော်တို့မွန်ဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းကြသည် နှင့်နိုင်ငံတကာ။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ
သည်အခြားထိပ်တန်း5ကုမ္ပဏီများ - ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်ရှာတွေ့သည်
အပြုသဘောစွမ်းအင်နှင့်လူနေမှုပုံစံ - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ
Bayt - ယူအေအီးထဲမှာခဲအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပေါ်တယ်
အကြောင်းပြောနေတာလူတိုင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့?။ Bayt မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခုဖြစ်သည် ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို။ ထောက်ပြဖို့ ဒီအလုပ် site ကိုဆော်ဒီအာရေဗျ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတို့ပါဝင်သည်, အိုမန်, ယီမင်, ကူဝိတ်, ကာတာနှင့်ဘာရိန်း။ ထိုအသင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာအခြားသူတွေနိုင်ငံတွေထဲကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။ Bayt Advertising မရေမတွက်နိုင်သောအလုပ်အကိုင်များနေ့တိုင်းနီးပါးကမ်းလှမ်း.
သငျသညျခက်ခဲသူတွေကိုတစ်ဦးဆိုရင်အများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား ကျွမ်းကျင်သူများရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်များ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သငျသညျသစ်ကိုအလုပ်ရှင်များမှနံနက်တိုင်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပေးပို့သင့်ပါတယ်။ ရေရှည်, သင်သည်သင်၏အိပ်မက်ရာထူးအစက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်တစ်ဦးမျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူညဦးတိုင်းလည်းဘာလုပ်သင့်။ ဤသည်ပေါ်တယ်လည်းမြင့်မားသည်အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အ rated ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုဟာ သင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်အဖြစ်ယူအေအီးကိုချစ်။ သောကြောင့်ယူအေအီး၌ဤဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ၏နေ့နှင့်ညဉ့်တစ်လျှောက်လုံးအသစ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အလုပ်နေရာလွတ် post ။ ထိုကြောင့်သူတို့ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်ယူအေအီး-based ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကြီးတွေဖြစ်ကြသည်ကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်ဒါကြောင့်သင်လည်းဖြစ်ကောင်းပါလိမ့်မယ် အာရေဗျကိုဖြတ်ပြီးအခွင့်အလမ်းများရှာတွေ့။ မြောက်အာဖရိကနှင့်ပင်ပါကစ္စတန်နှင့်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုမျိုး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်.
Gulftalent - ပြည်ပရှိများအတွက်အကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း site ၏တစ်ခုမှာ
ဒီအလုပ်ပေါ်တယ်နှင့်အတူအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ လျင်မြန်စွာပြုလုပ်အခြားသောလမ်းထားရန် တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီး GulfTalent CV ကိုဆောက်သုံးပြီးသင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ၎င်းတို့၏ပညာရှင်ပီသစွာချပ် CV ကိုများနှင့်ပရိုဖိုင်းကိုသုံးပါ ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့အလုပ်အမဲလိုက်ခြင်းများအတွက်။ သူတို့ရဲ့ website တွင်လည်းနမူနာ CV ကိုအချို့ကိုကြည့်ပါ။
ပင်လယ်ကွေ့-ခွက်တဆယ်ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်စုဆောင်းရေးအလုပ် site ကိုပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများကတစ်ဦးထံမှအထင်ကြီး 4,000 ကုမ္ပဏီများသည်လတ်ဆတ်သောစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးနှင့်ငှားရမ်းမန်နေဂျာ အသစ်အခွက်တဆယ်ကိုရှာဖွေသူတို့၏န်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဒါမန်, ADCB နှင့် Etisalat အပါအဝင်အချို့ရှိကြီးတွေငှားရမ်း hitters, ရှိပါတယ်။
ဤ ဒူဘိုင်းဌားရမ်းကုမ္ပဏီ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အညာဘက်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအနှံ့ကိုဝင်ရောက်ပေးထားပါတယ်။ သင်ပိုမိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေမယ့် ပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ သငျသညျကိုသာယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာကြသည်လျှင်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျရရပ်တန့်နိုင်မရရှိနိုင်ပါရာထူးအနည်းငယ်အမှုဆောင်အရာရှိရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအကြောင်းကိုအိပ်မက်.
MonsterGulf - GCC နိုင်ငံများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပေါ်တယ်
အဆိုပါ Monstergulf အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီဌာနခွဲစီမံခန့်ခွဲ။ နဂါးဟာအလွန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေအလုပ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများမှာကတည်းကအလုပ်အကိုင်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ အများအပြားမော်တော်ကားကဏ္ဍများ။ အိမ်ခြံမြေမှဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အတူပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေတနည်းအားဖြင့်နဂါး gulf ။ ဒီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူပြောသည်နှင့် ဒါကြောင့် function ကိုအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေဖြစ်နိုင်သောရဲ့အလုပ်အကိုင်အဝဘ်စာမျက်နှာ, တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်း။ ဤသည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း site ကိုလည်းအွန်လိုင်းအလုပ်လျှောက်လွှာအသစ်အားကျွမ်းကျင်သူများအဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ CV ကို upload လုပ်ခွင့်ပြုနှင့်အကြံပြုချက်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အကြံဉာဏ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံ.
Charterhouse - ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင််ထမ်းခေါ်ယူမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း site ကို
ဤသည်မှာအေဂျင်စီထဲမှာလည်ပတ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်သင်တန်း၏, ယူအေအီးအတွင်းပိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးများအတွက်စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်, ဒီကုမ္ပဏီကိုစတင်ရန် 2004 ကတည်းကယူအေအီးအတွက် operated ။ Charterhouse ရှာဖွေနေကြသူကျွမ်းကျင်သူများလူများအတွက်ရာထူးရရှိနိုင်ရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသို့မဟုတ်ဒုတိယအလုပ်အကိုင်အများအတွက်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအများအပြားပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထက်အငယ်တန်းရိုးရှင်းရာထူးများအတွက်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစကအရမ်းအလုပ်အမှုဆောင်အတွက်အထူးပြု နယ်ပယ်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အစုဆောင်းမှု.
မိုက်ကယ် 's Page - ယူအေအီးအတွက်ဒူဘိုင်း site ကိုအတွက်ဂျော့ဘ်
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မိုက်ကယ် 's Page ကုမ္ပဏီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည် အထူးကုစုဆောင်းမှုအဖှဲ့အစညျး။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒီကုမ္ပဏီခိုင်မြဲစွာဒူဘိုင်းစီးတီးဈေးကွက်ထဲမှာတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ရုံးများရှိသည်။ ဒီအကောင်းဆုံးနိုင်ငံများနှင့်မြို့ကြီးများအပါအဝင်စစ်မှန်တဲ့မိုက်ကယ် 's Page ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ စုဆောင်းမှုရည်ရွယ်ချက်။ ထိုကဲ့သို့သောဂျပန်အဖြစ်အတူတကွအိုင်ယာလန်နှင့်သြစတြေးလျနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်သူတို့တစ်တွေအဘို့၌သင်တို့ကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ် ရာထူး၏အကွာအဝေး entry ကိုအလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်အမ်းမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းအတွက်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အဆင့်အထိ။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် - တမူထူးခြားတဲ့ Be အသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေ!
သင်ယူအေအီးနေစိတ်အားထက်သန်နေလျှင်ထို့အပွငျ, ကန့် တိုင်းပြည်ပရှိများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ ၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာအထူးအာရုံစိုက်ဖို့။ ဘယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ, အမ်းမရိတ်အတွင်းအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလယ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍအခန်းကဏ္ဍများပါဝင်သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း, အသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သင်တန်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးဖော်ပြခြင်းမနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ off ကမ်းခြေ.
အစိုးရကုမ္ပဏီများမူလကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာကျော်အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းစီးတီးအတွက်အလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီများသည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်လည်းပါတယ် မြေတပြင်လုံး GCC နိုင်ငံများသို့တိုးချဲ့နှင့်ဟိုမှာကပိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်။ ကြော်ငြာအလုပ်အကိုင်အများစုမှာထိုကဲ့သို့ဒိုဟာ, ဒူဘိုင်း, အဖြစ်မြို့တော်အခြေစိုက်ကြသည်နှင့် Riyadh။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကြီးတွေပါပဲနဲ့သူတို့ကယူအေအီးအတွက်အရေးအပါဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်နှိုင်းယှဉ် သငျသညျဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်သူများဆိုရင် သို့မဟုတ်ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ့အတွက်အလုပ်အမှုဆောင်အင်ဂျင်နီယာအထူးကု။ ထို့အပြင်, ဆောက်လုပ်ရေး, အင်ဂျင်နီယာ, ဘဏ်လုပ်ငန်း, အိုင်တီသို့မဟုတ်လက်လီစက်မှုလုပ်ငန်း။ သင် ... သင့်တယ် အဲဒီမှာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေစတင်ရန်။ ဤရွေ့ကားအံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီများသည်ကြိုးစားရန်ထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အလုပ်ရှာဖွေရေး
ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ယူအေအီးကြီးထွားလာ၏အလင်း၌။ အလုပ်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်နှင့်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ အမှန်တကယ်, သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းစူးစမ်းလေ့လာသင့်ပါတယ် အလုပ်အကိုင်အစျေးကွက်နှင့်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ဒူဘိုင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခရီးအလုပ်အကိုင်နှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများကို၏ကျယ်ပြန့်အလုပ်အကိုင်အကွာအဝေးကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။
ကုန်စည်ပြပွဲအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရရှိနိုင်ပါသည် ခြွင်းချက်လူများနှင့်စမတ်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်။ သင်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 HR အဖွဲ့က join ဖို့ရှာကြသည်လျှင်အခြားသောလမ်းထားရန်, သင်လုံ့လရှိသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သင့်ကြောင်း, အသစ်တစ်ခုကိုရာထူးမြင့်မားလှုံ့ဆော်မှု နှင့်သင့်အသစ်များကိုအသင်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှုတ်သွင်း။
1,000 ကျော်ရှိပါတယ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2018 ၌သင်တို့အဘို့အဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်။ သငျသညျ entry-level အလုပ်ရှာဖွေသူ Are ?. ဒါမှမဟုတ်အဆင့်မြင့်အလုပ်အမှုဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေ ?. ပြည်ထဲရေး၏အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနကကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 1,200 အလုပ်နေရာလွတ်ဒူဘိုင်းမြို့အတွင်းအမျိုးမျိုးသောဌာနများအတွက်ပြည့်ဝဖို့ကျော်ရှိပါတယ်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများအပြားရေတွင်း-paid ၌ရှိကြ၏ အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍ။ သင်တို့အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့ရှာဖွေနေပါကဤနေရာတွင် Apply အစိုးရအလုပ်အကိုင်များ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ: ဤစက်မှုလုပ်ငန်းများရန်သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းထည့်ပါ။ ပြီးတော့ speding အကြောင်းပိုမိုဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်သင်၏အချိန်ထွက်ရှာတွေ့.
ဒူဘိုင်းအစိုးရ တစ်ဦးလက်ျာဘက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဘို့ Human Resource Department မှအလုပ်ရှာဖွေရေးသည်။ ဤကိစ္စတွင်, ဒီအခွင့်အလမ်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာနေရာချထားလူတစ်ဦးဖြစ်လာပါစေ။ မြူနီစီပယ်က၎င်း၏မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းရန်သင့်ရွေးချယ်မှုကိုဦးစားပေးသူတို့ကို join ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုက၎င်း၏မှတဆင့်အခြေခံရည်ရွယ်ချက်များကိုသိရန်ဖြစ်ပါသည် တန်ဖိုးများ ဒူဘိုင်းအစိုးရကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သာအနည်းငယ်သင် "ခံမှု, ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းသိသင့်ရှိပါတယ်, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု, Transparency နှင့်ပျော်ရွှင်မှု"။
သငျသညျနိမ့်ဆုံးထိဖို့လိုအပ်အစိုးရနှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်တစ်ခုရှိသည်ဖို့လိုအပ် အထူးကုလွတ်ဘို့က MBA ပညာရေး.
TECOM Group မှာအလုပ်အကိုင်များ
TECOM Group မှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်တစ်ဦးအကွာအဝေးကမ်းလှမ်း ဒူဘိုင်းမြို့, ဤကုမ္ပဏီတစ်ရုံကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ လတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရတဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ Tecom အုပ်စုကိုညာဖက်ကျွမ်းကျင်မှုအစုံနှင့်အတူကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဒေသခံအလုပ်ရှာဖွေသူများ employ ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရည်အချင်းများနှင့်အရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်သူကိုယ်စားလှယ်လောင်း လွယ်ကူသောသူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရနိုင်သည်။
အဆိုပါ Tecom အုပ်စုတစ်စုအိန္ဒိယ, အမေရိကန်, ကနေဒါ, သြစတြေးလျနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေယဉ်ကျေးမှုအခွက်တဆယ်ရေကူးကန်န်ထမ်း။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ကုမ္ပဏီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူဖွ ဒူဘိုင်းယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားစဉ်းစားရန် နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ပြီးခဲ့သည့် 20 နှစ်တွေကုမ္ပဏီတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ပေးသည် တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးမှအကျိုးဖြစ်ထွန်း။ ဒူဘိုင်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြီးထွားလာစျေးကွက်မှအားကောင်းတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ။ ကုမ္ပဏီ GCC နိုင်ငံတွေအတွက်အလွန်ထိရောက်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစေသည် အံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီများနှင့်နှငျ့သငျညာဘလူတစ်ဦးလျှင်သင်မန်နေဂျာဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, 2018-2019 အတွက် TECOM Group မှရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုမ္ပဏီအတွင်းရရှိနိုင်ရာထူး၏နံပါတ်ထွက်ပြည့်ဝဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဤသည်ကိုကောင်းစွာသိ ဒူဘိုင်းအားလုံးကိုအဆင့်ဆင့်မှာအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်သမားဒူဘိုင်းမြို့။ သငျသညျ Tecom Group မှအဖွင့်အဘို့စဉ်းစားနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ updated သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita ပေးပို့သင့်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးအနှစ်ချုပ်ရန် ဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီအလုပ်ရှာဖွေရေးသွားရောက်ကြည့်ရှု အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို upload တင်ပေးရန်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုများတွင်ဂျော့ဘ်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ !.
ဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်
ဤအချက်များအားတိုက်ရိုက်လျှောက်ထား ဒူဘိုင်း Holding ဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ "Gov" ယောဘရ။ သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီး Holding အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း post သင့်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါသည် ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ။ ဒီလက်ငင်းမှာ, သင်ပင်၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီထံမှသတိပေးချက်များကို set up နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှင်များအနေဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတောင်းဆိုမှုကိုနှင့်မေးမြန်းချက်လက်ခံရရှိသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်တိုက်ရိုက်အစိုးရရှာဖွေစုဆောင်း၏လက်လှမ်းမမီ။ သငျသညျယူအေအီးအစိုးရစာမျက်နှာများရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် Upload လုပ်ပါနိုင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်း Holding Group မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် - ဒူဘိုင်း Holding ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုများတွင်ဂျော့ဘ်။
သငျသညျယခုဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မန်နေဂျာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်း, ဧညျ့, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, အိမ်ခြံမြေ & ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကုမ္ပဏီများသည်တစ်အစုစုနှင့်အတူကျယ်ပြန့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတှေ့အကွုံရှိရှိသည်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း-related အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆုံးမဩဝါဒပေး.
2009 မျိုးစုံစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစီးပွားရေးမှာကွဲပြားစုံလင်တဲ့အတွက်နျဆာပအခန်းကဏ္ဍကစားကတည်းကဒူဘိုင်းကျင်းပခြင်း။ စုပေါင်းသူတို့ကုမ္ပဏီများ, အစဉ်မပြတ်နေတဲ့ရေရှည်တည်တံ့၏ထောက်ခံမှုနှင့်ကြီးထွားကားမောင်း, 12 စက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုကိုယ်စားပြု 2021 များအတွက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု Vision ၏နှင့်အညီဆန်းသစ်တီထွင်မှုဦးဆောင်သောစီးပွားရေးကို.
သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေ ကြောင်းဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်, ပြည့်စုံလေ့ကျင့်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ အသစ်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Start နှင့်တစ်ဦး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အစာရှောင်ခြင်း-move များနှင့်စိန်ခေါ်မှုပတ်ဝန်းကျင်။ ဒူဘိုင်းဦးပိုင်ရန်သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိုပို့ပါ။
remmember တပိုပြီးအရာဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းကပြစ်မှုတစ်ခုအလွန်နိမ့်မှုနှုန်းရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်ကရှာတွေ့စေချင်ပါဘူး ဒူဘိုင်းယောဘ? ဤစကားမှန်ပေမည်ဖြစ်သော်လည်း ငါတို့သည်သင်တို့လူငယ်တစ်ဦး familly များမှာပင်လျှင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်အတွက်အသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန် ယူအေအီး!
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ! - ဒူဘိုင်းမြို့